Diyaarado dagaal oo shacab badan ku xasuuqay Soomaaliya |
Diyaarado dagaal oo shacab badan ku xasuuqay Soomaaliya
Wararka ka imaanaya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in Goordhaw Duqeyn ay geesteen Diyaarado dagaal oo loo maleenayo in laga leeyahay dalka Kenya ay dad badan oo Shacab ah ku dileen Deegaano katirsan Gobolka Gedo.
Sida aan Wararka ku heleyno Duqeynta ayaa ka dhacday inta u dhaxeysa Degmada Ceel-Waaq iyo Deegaanka Dhamas ee Gobolka Gedo, waxaana goobaha la duqeeyay la sheegay in ay dagnaayeen dad rayid ah oo xoolo dhaqato u badnaa.
Duqeynta Diyaaradaha Dagaalka fuliyeen ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dad gaaraya 10-qofood oo shacab ah , waxaana dadka dhintay shan kamid ah la sheegay in ay ahaayeen caruur dugsi Qur’aan dhiganeysay.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Gobolka Gedo ee Dowlada Soomaaliya iyo Dowlada Kenya oo ku aadan Duqeynta diyaaradeed ee ka dhacday Gobolka Gedo kuna geeriyoodeen dad badan oo shacab ah.
Diyaaradaha Dagaalka Kenya ayaa marar badan Duqeymo ay dad shacab ah ku dileen waxa ay ka fuliyeen Magaalooyin iyo deegaano katirsan Gobolada Jubooyinka iyo Gedo, lamana oga duqeynta maanta dhacday cida ay la dooneysay Dowlada Kenya in ay ku wax yeeleyso.